Buddha Big - lena cishe main ezikhangayo ezakhiwo Phuket. Sihlezi Phezu kwentaba Buddha kwemibhoshongo omkhulu phezu lesi siqhingi, futhi kungabonwa kusuka cishe kunoma iphuzu Phuket. Kungokwemvelo lokho, ebuka le isikhumbuzo kusuka ebhishi, izivakashi eziningi ufuna ukubona eduze.
On esiqongweni sentaba Nakaked kuyinto esifanekisweni abadumile, othiwa Big Buddha. Phuket namuhla evakashela izigidi zezivakashi, futhi akukho uhambo esiqhingini kuqedile ngaphandle ukuhlola lokhu lesikhumbuzo. Isakhiwo Itholakala iningizimu yesiqhingi. Isithakazelo izivakashi isivele umgaqo ethempelini.
Endleleni eya phezulu zikhona amaphuzu amaningana lapho ungakwazi ukuqasha indlovu real bukhoma nganoma yisiphi isikhathi. Siyaqiniseka ukuthi ukuxhumana kulezi zintaba ukuphatha njalo. Ngaphezu kwalokho, kukhona izindawo nge izinyoni nezinkawu.
Ubani futhi yini iya lesikhumbuzo?
Ethempelini Big Buddha ePhuket minyaka ngokubaluleka kuthandwa phakathi izivakashi zakwamanye amazwe, naphezu kweqiniso lokuthi ukwakhiwa nemisebenzi aqeda iningi izindawo akuphelelanga okwamanje.
Abantu ukuya Big Buddha, ngenxa yezizathu ezihlukahlukene: abanye ngenxa yelukuluku lutho, abanye ngenxa yokuqiniseka zenkolo, futhi umuntu nje ufuna ujabulele kwelanga omuhle emphemeni observation, esisogwini Insimu eziyinkimbinkimbi.
Kunezinhlobo ezintathu izinguqulo umsuka lesi sakhiwo grand. Bazakunazisa iziqondiso ezidingekayo futhi bendawo. Le nguqulo yokuqala ithi uhulumeni wendawo ukhulelwe ancintisane iziphathimandla Koh Samui, lapho kukhona khona futhi kwesithombe Buddha. Nokho, kukhona usayizi nesizotha more - amamitha nambili.
Indaba yesibili ka-Big Buddha at Phuket, lisitshela ukuthi bendawo banquma Nqamula ukuziqhelelanisa izihambi ngubani babe ngaso sonke isikhathi imicabango emsulwa usebenzisa esifanekisweni. Thais, ngokungangabazeki, abantu nezindaba yokwamukela futhi banobungane, kodwa inkolo ngabo kuzo ziyinto engcwele.
Inguqulo wesithathu ukubukeka lesikhumbuzo lithi indawo lapho eziyinkimbinkimbi yakhiwe, ezingaqondakali, noma kunalokho, iyindawo kwamandla.
Eqinisweni, i-Big Buddha (bangakwazi siziqhenye Phuket ngakwesokudla) yayakhiwe njengesipho. Ukwakhiwa lesikhumbuzo ukuthi kuphelelwe yosuku igama Rama IX - King of Thailand. Wethula main Buddha sithombe bese lesikhumbuzo, amamitha nambili okusezingeni eliphezulu, eyakhelwe Queen Sirikit.
Izimali lokuqala labelwe ukwakhiwa neziphathimandla zendawo. Ngaphezu kwalokho, iminikelo yasetshenziswa bendawo futhi abahambi abavela emhlabeni jikelele. Ukwakhiwa lesikhumbuzo amamitha amane nanhlanu ukuphakama, wethulwa 2002. It wayechithe izindodla zemali - abacishe babe izigidi amathathu baht. Ngakho kwaba khona Big Buddha (Phuket). Umlando sokudalwa, ababuyekezi bebelokhu lapha izivakashi edonsa izivakashi ezingaphezu kulesi siqhingi. Okwamanje, ithempeli kusakhiwa, kanye nezinsuku ekupheleni ungazange inqunyelwe.
Ethempelini iseningizimu indawo olunothile kakhulu. Ngokusho yetinsita endulo entabeni Nakaked wahlala inyoka enkulu Naga, ogama lakhe walaliswa okuthiwa. Abantu bendawo bathi kule ndawo yamandla, kwavelaphi Buddha wazindla.
Uma they finyelela ethempelini womuzi wenyukela esiqongweni sentaba, uzobona amabili eziqoshiwe Buddha - main elenziwe ngemabula qwa, yaletha esuka eBurma, nekhophi yayo encishisiwe, elise kancane kwesokunxele lesikhumbuzo. Lokhu nambili-Buddha ezazenziwe ngethusi futhi anikezelwe Queen of Thailand. Ngo womshini lesikhumbuzo usephendukele amathani amabili ezimbili zethusi.
Uma ubheka i-zemabula Buddha ngosuku olucwathile libalele, khona-ke uyoba nomuzwa wokuthi esifanekisweni luthungelwa - kangaka bezinto amatshe elangeni. Ubukhulu bayo kanye nobuhle ushaya Big Buddha. Phuket akanayo izikhumbuzo amaningi kakhulu yezakhiwo, kodwa lokhu eyinkimbinkimbi iyokugqiba konke lokhu ethile.
Itshe lesikhumbuzo ngempela ukuphakama enkulu amamitha amane nanhlanu, futhi ubukhulu - amamitha amabili nanhlanu. Uma ubuka eduze, uzobona ukuthi esifanekisweni yakhiwe emabhuloki elincane zemabula. Wonke umuntu wamukelekile ukuba ngenkokhelo okuzisholo ukuthenga isitini, bhala ku isifiso senhliziyo ke zabo, futhi izosetshenziswa ku yokuqedela wethempeli.
Kodwa Big Buddha - akusiyo nje esifanekisweni ku esiqongweni sentaba, kuba ethempelini eziyinkimbinkimbi esikhulu kakhulu, ukwakhiwa esaqhubeka nanamuhla. Manje iqhutshwa kuphela iminikelo.
Uma uzithola phezulu entabeni, wena kuzwakale ukuthi ukukhangwa kuphela eziyinkimbinkimbi esifanekisweni omangalisayo Buddha. Kodwa lokhu akulona icala. Zikhona nezinye izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu eziningi eyashayisa bezinto igolide, nakuba Yiqiniso, kungukuthi wenza ngegolide elihlanzekile.
Ngaphandle eziqoshiwe Buddha ku eziyinkimbinkimbi kunezinye ezikhangayo. Ngakwesokudla lesikhumbuzo itholakala e-altare, ngakwesokunxele isitolo esincane. Kungenzeka ukuthenga izithelo, amanzi, izinto eziyizikhumbuzo.
Ethempelini, umnyango esemgwaqweni ngaphansi esifanekisweni main, kukhona Museum encane. It sihlanganisa izithombe zikamama ukwakhiwa kanye isakhiwo sethempeli, enikeza umbono wokuthi kanjani uyobheka efomini esiphelele.
Emhlabeni sakhiwo nezitsha eziningi. In ngamunye kubo ungakwazi abeke esasikuwo, futhi nakanjani nenhlanhla.
Ekujuleni ethempelini ungakwazi ukuhlangana engumBuddha. Kuye, ungaya futhi ahlale phambi kwakhe ngamadolo akhe, futhi uyokubusisa, ufafaze amanzi, futhi ufisa inhlanhla ukuthi ziqalise esandleni sakho sai isono - isongo aluka. Abesilisa esebopha ifindo isongo ngakwesokunene sayo, futhi abesifazane - ngakwesobunxele. Kuleli qophelo kufanele wenze isifiso. Sai isono ayikwazi ukususwa uma nje akabashiyi wena wedwa. Futhi uma lokho kwenzeka, isifiso sakho zizogcwaliseka.
A kancane okwengeziwe, uzobona ezitebhisini eholela phansi eziyinkimbinkimbi yesibili. Ngaphambi kokufinyelela Big Buddha, uzobona isithombe Vasunthary - unkulunkulukazi wenzalo kanye umhlaba. Le ndawo njalo uya eziningi izivakashi.
Isakhiwo kuhlanganisa ithempeli yokukhulekela. Wawunamafutha amasevisi pilgrims bendawo. Iphinde inohlelo esitolo amancane lapho ungakwazi ukuthenga izinto eziyisikhumbuzo zenkolo langa.
Ukuya ngomqanso endleleni eya Big Buddha, uzobona isihlahla, hung kanye nezikhencezo nge amanothi (nge izicelo kanye nezifiso). Eceleni isihlahla igibele zethusi gong ukuthi ongenza magic Ihubo, kodwa akuzwakalanga lutho. Ngokwenkolelo, ukuzwa umsindo nomsindo can umuntu nangengqondo okumsulwa nenhliziyo evulekile.
Hlikihla futhi wenze isifiso. awukwazi beat it, uzokwenza nje izindela.
Izakhamuzi Esingavamile eziyinkimbinkimbi
On campus uzokwazi ukuhlangabezana nabakhileyo engavamile - emkhayeni omkhulu lezimfene. Izilwane bahlala eduze ethempelini, futhi cishe nsuku zonke beze kuye: abantu ukubona futhi kuyabonakala.
Ngaphandle ukukwazi futhi siyijabulele ubuhle Phuket, kwi emphemeni observation, ungakwazi zama ukubona ngamehlo engqondo lo mkhuba Buddhist. Ngokwesibonelo, ezindongeni esontweni, Uma unganakile, zingezona ezibonakalayo kakhukhunathi amagobolondo. Eqinisweni, lena massage esikhulu izinyawo. Wonke umuntu uyazi ukuthi amathe ezinyawo kukhona amaphuzu ahlobene kuzo zonke izinhlaka emzimbeni. Lapha ungakwazi ukufunda imiyalelo kanjani ukuma lukakhukhunathi esingakanani. Mangisho ukuthi le nqubo kubuhlungu ngempela. Kodwa uma ukujabulela massage, amagobolondo kungenziwa wayala ukuba simthathe. Ngokuthakazelisayo, ngentengo fixed we masseur ethempelini lapho, uyanquma ukuthi ukushiya inani lomnikelo.
Kanjani ukuze uthole Big Buddha Phuket?
Kunezindlela eziningana. Mayelana nabo thina uchaze ngezansi:
Hamba complex kungaba, kodwa lokhu endleleni ngempela kuyakhathaza. Kodwa uma eziqinile ngokwenyama, kuba uhambo uyokufa ukujabulela. Vele uchofoze amakhadibhodi (eduze Kate) ubone lapho emnyango kuya oLwandle & Sky amafulethi. Kukhona uzobona isibonakaliso, ngesandla - Big Buddha. It has an Umcibisholo lokhombisa sikhatsi isiqondiso. Endleleni ngeke ngokuvamile ukuhlangabezana izikhombo ezinjalo. Indlela phambili ekuseni ngoba ukushisa neze ukuhamba ubumnandi.
Encwadini ezokuthutha aqashiwe zingenza uthole statue Big Buddha of Phuket. Kanjani ukuze baye khona? Kusukela Caron sendleleni ithrekhi Tesco Lotus. Ngaphambi kokuba lifike kuleyo ke, jikela kwesokunxele emva iringi. Kukhona uzobona isibonakaliso, kulandelwa baphendukela ezinhlotsheni Big Buddha.
Indlela elula ukuvakashela eziyinkimbinkimbi phezu bhasi. Lokhu uhambo Big Buddha, kuyingxenye uhambo Phuket. Uma uyithenga - uzobe wabuyiselwa induduzo. Kodwa uhambo khulula ngaleso opharetha ukuvakasha musa batusa ethatha: izikhangibavakashi wena ungabonisi, futhi usuku lonke uyokulwa Amahhovisi realtor kanye nezimboni.
Ngo ibhasi kwamadolobha (songteo). Bavame ukuya esiqhingini ngamazwi athi "Big Buddha". Uma ungakwazi ukuqasha ezokuthutha futhi ungafuni ukuya uhambo - kungcono kukho okuhle.
Ngu itekisi, yebo, kungaba ntofontofo kakhulu ukufinyelela lesikhumbuzo. Kodwa khumbula ukuthi lolu hlobo ezokuthutha e Phuket - eqolo, uhambo izobiza kakhulu eqolo ngaphezu kwanoma e Pattaya noma Bangkok.
Ethempelini ivuliwe nsuku zonke kusukela 8.00 ukuze 20.00. Kodwa izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo amahora emifushane ukusebenza - kusukela 10.00 kuya 17.00. Labo abafuna ukwenza isithombe esikhulu inkumbulo, sincoma bezofika eziyinkimbinkimbi eduze kwelanga. Kukhona nezimfuneko ezithile ukuze ukubukeka izivakashi. Abesilisa kumele bagqoke amabhulukwe futhi ihembe noma isikibha esinobuso imikhono. Abesifazane badinga ukugqoka sarong (ingubo ekhethekile emathangeni akhe) noma isiketi eside.
Uma uza esohambweni ngqo kusuka ebhishi, ungakhathazeki - uzonikezwa i-sarong esiku mahhala.
Big Buddha, Phuket amathiphu
Lapho evakashele plan eziyinkimbinkimbi okungenani isigamu ngosuku. Insimu omkhulu, saze saphela sonke leso isheke, yenza isithombe, ukuthatha umoya oqabulayo - ngeke ubone ukuthi isikhathi siyandiza.
Wozani Buddha kusihlwa, khona-ke uyokwazi ukubona ukushona kwelanga emangalisa bese uthatha isithombe.
Wonke umuntu oye waba nethuba lokuxoxa lokhu amazing, awukaphothulwa Temple - Big Buddha (Phuket), Izibuyekezo rave ushiye. Imfihlo ukuthandwa futhi isici ngokumangalisayo eyinkimbinkimbi, ngokuvumelana abahambi, kuyinto emkhathini kule ndawo okungavamile. Uma uthi nhlá, kukhona izivakashi eziningi, kodwa kukhona nhlobo ukucindezeleka futhi befuna.
Izinhlobo zezinhlangano nezici zazo ezimfushane